Global Voices teny Malagasy » Hanana Filoham-Pirenena Vaovao Ihany Ve I Libanona Taorian’ny Fanohanan’i Geagea An’i Aoun? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Janoary 2016 4:31 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini, Abir Ghattas Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Libanona, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Vaovao Mafana
“Mangatsiaka izay ny any amin'ny helo,” hoy ny hanihanin'i Anthony Elghossain (@aelghossain ) raha nanaraka amin'ny solosaina ny fifanarahan'i Aoun-Geagea izy. Saripika zaraina ao amin'ny Twitter.
Nanambara ny mpitarika ny Hery Libaney Samir Geagea  fa manohana ny firotsahan'ny mpifanandrina aminy nandritra ny ady Michel Aoun  ho kandidà filoham-pirenena. Midika io fifanarahana io fa mety hanana filoham-pirenena vaovao ihany i Libanona 20 volana taorian'ny fahabangan'ny olona eo amin'ny toerana.
Mpifahavalo nifanandrina i Geagea, filoha mpanatanteraky ny Hery Libaney, antoko kristiana faharoa lehibe indrindra ao Libanona, sy i Aoun, komandin-tafika Libaney teo aloha sady mpanorina ny Hetsika Tia Tanindrazana Afaka nandritra ny Ady an-trano Libaney  (1975-1990). Tamin'ny 31 Janoary 1990, ny Tafika Libaney nanana an'i Aoun ho komandi-tafika no nifandona tamin'ny Hery Libaney, rehefa nilaza i Aoun fa tombontsoam-pirenena ho an'ny governemanta ny “manambatra ny fitaovam-piadiana” izay nidika fa tsy maintsy mankatò ny fahefany ho filoham-panjakana ny Hery Libaney. Nitarika fahafatesan'olona sivily an-jatony izany ady izany.
Ho fanasarotan-draharaha, lazaina i Geagea fa tohanan'i Arabia Saodita, raha mahazo ny fanohanan'ny Hezbollah kosa i Aoun, izany hoe mahazo ny fanohanan'i Iran. Raha mampanakaiky kokoa an'i Aoun mankany amin'ny prezidansa ny fanohanana, dia tsy miantoka velively ny hahazony ny toerana avy hatrany izany, satria mbola mila ny fanohanan'i Walid Jumblatt, mpitarika ny Antoko Sosialista Liampandrosoana izy, ankoatra ny fanohanan'ny Hezbollah, izay efa azon'i Aoun. Tokony hiezaka hahazo ny fanohanan'ny vondrona parlemantera hafa ihany koa izy, ao anatin'izany ny an'ny Praiminisitra Libaney teo aloha Saad Al Hariri , izay mitarika ny hetsika 14 Marsa , sady manohana ny firotsahan'i Suleiman Frangieh  ho filoha. Ao LIbanona dia tsy maintsy Kristiana Marônita ny filoha, saingy tsy maintsy voafidin'ny parlemanta.
Manotany tena i  Halim Shebaya :
Na dia ilay mpihira malaza ao Libanona, Elissa , izay nisioka tamin'ny mpanjohy azy miisa 8,2 aza dia mandray tsara ity fihavanana mitohy indray eo amin'i Geagea sy Aoun:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/01/22/78516/
 Ady an-trano Libaney: https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanese_Civil_War
 14 Marsa: https://en.wikipedia.org/wiki/March_14_Alliance
 Manotany tena i: https://www.facebook.com/halim.shebaya/posts/10156403750760316